8768 kintana valo amin'ny antsipiriany.
Fiakaran'ny vidin'ny varotra vola virtoaly eran-tany. Ny tontolonao manokana miaraka amin'ny taham-pifanakalozana, sora-baventy ary ny loha-bolam-pamokarana voafantina voafantina. 8768 kintana valo amin'ny antsipiriany.
ora Day Week Month 3 volana taona 3 taona
USD - US dolara BTC - Bitcoin EUR - Euro GBP - kilao Sterling JPY - Yen CNY - Yuan RUB - Rosiana roubles AUD - Aussie dolara AZN - Azerbaijani manat ALL - Albaney Lek DZD - Alzeriana Dinar XCD - Atsinanana Karaiba dolara AOA - Kwanza MOP - Macanese pataca ARS - Arzantina Peso AMD - Armeniana dram AWG - Avy tao Aruba Florin AFN - Afghan Afghani BSD - Bahamian dolara BDT - Bangladesy taka BBD - Barbados dolara BHD - Bahrain Dinar BYR - Belarosiana roubles BYN - Belarosiana roubles BZD - Belize dolara XOF - CFC Franc BMD - Bermudes dolara BGN - Biolgara Lev BOB - Boliviana Boliviano BAM - Bosnia sy Herzegovina convertible marika BWP - Botsoana Pula BRL - Breziliana tena BND - Broney dolara SGD - Singapore dolara BIF - Burundi Franc BTN - Bhutan ngultrum INR - Indian Rupee VUV - Vanuatu vatu HUF - Hongariana forint VEF - Venezoeliana Bolivar Fuerte VND - Vietnamesse Dong XAF - CFC Franc HTG - Haitiana gourde GYD - Goiana dolara GMD - Gambiana dalasi GHS - Ghana cedi GTQ - Goatemala quetzal, GNF - Ginea Franc GIP - Gibraltar kilao HKD - Hong Kong dolara HNL - Honduras lempira GEL - Zeorziana Lari DKK - Danoà satro-boninahitra DJF - Djibouti Franc DOP - Dominikana Peso EGP - Ejiptiana kilao ZMW - Zambian Kwacha MAD - Maraokana dirham ZWD - Zimbaboe dolara ILS - Israeliana sekely vaovao IDR - Indonezianina Rupiah JOD - Jordana Dinar IQD - Irakiana Dinar IRR - Iraniana Rial ISK - Islandy krone YER - Yemenita Rial CVE - Cape Verde escudo KZT - Kazakhstani tenge KYD - Cayman Islands dolara KHR - Kambojiana riel CAD - Canadian dolara QAR - Qatari riyal KES - Kenya shilling COP - Kolombiana Peso KMF - Comoran Franc CDF - Kongoley Franc KPW - Won Koreana Avaratra KRW - Won Koreana Tatsimo RSD - Serba Dinar CRC - Costa Rica Colon CUP - Kiobàna Peso KWD - Koetiana Dinar NZD - New Zealand dolara KGS - Kyrgyzstani, som LAK - Lao Kip LVL - Zavatra Lat LSL - Loti ZAR - Rand LRD - Liberia dolara LBP - Libaney kilao LYD - Libyana Dinar LTL - Litoanianina litas CHF - Soisa Franc MUR - Maorisy Rupee MRO - Maoritaniana ouguiya MGA - Malagasy ariary MKD - Masedoniana denar MWK - Malawi Kwacha MYR - Malaysin ringgit MVR - Maldivian rufiyaa MXN - Meksikana Peso MZN - Mozambikana metical MDL - Moldavia Leu MNT - Mongoliana tugrik MMK - Burmese kyat NAD - Namibiana dolara NPR - Nepaley Rupee NGN - Nizeriana Naira ANG - Antilliaanse gulden NIO - Nikaragoa Cordoba XPF - French Pacific Franc NOK - Norvejiana krone AED - UAE Dirham OMR - Omani Rial SHP - Saint Helena kilao PKR - Pakistan Rupee PAB - Panameana Balboa PGK - Kina PYG - guarani PEN - Peroviana Nuevo Sol PLN - Poloney zloty RWF - Rwanda Franc RON - Malagasy Romanian Leu XDR - SDR (Special mpitan-zo) SVC - Salvadoriana Colon WST - Tala STD - Sao Tome sy Principe dobra SAR - Saodiana riyal SZL - lilangeni TRY - New Tiorka Lira SCR - Seychelles Rupee SYP - Syriana kilao SKK - Slovaky koruna SBD - Nosy Solomon dolara SOS - Somali shilling SDG - Sudanese kilao SRD - Suriname dolara SLL - Leone TJS - Tajik somoni THB - Thai baht TWD - Taiwan new dolara TZS - Tanzaniana shilling TOP - pa`anga TTD - Trinidad sy Tobago dolara TND - Toniziana Dinar TMM - Turkmenistan manat TMT - Turkmenistan new manat UGX - Oganda shilling UZS - Uzbekistan vola UAH - hryvnia UYU - Orogoaiana Peso FJD - Fidji dolara PHP - Filipina Peso FKP - Nosy Falkland kilao HRK - Malagasy Croatian Kuna CZK - Czech koruna CLP - Shiliana Peso SEK - Zavatra krona LKR - Sri Lanka Rupee ERN - nakfa ETB - Etiopiana Birr JMD - Jamaikana dolara SSP - Atsimo Sodane kilao CLF - Shiliana Unidad de Fomento EEK - Estoniana kroon GGP - Guernsey kilao IMP - Manx kilao JEP - Jersey kilao MTL - Maltais Lira XAG - Volafotsy Troy XAU - Troy grama ny volamena / elektronika volamena) ZMK - Zambian Kwacha ZWL - Zimbaboe dolara ATS - Aotrisiana shilling AON - Angole vaovao Kwanza BEF - Belza Franc GRD - Grika drachma IEP - Irlandey kilao ESP - Zavatra peseta ITL - Italiana Lire CYP - Sipra kilao DEM - Deutsche marika NLG - Holandy guilder PTE - Portogey escudo SIT - Slovenianina tolar SRG - Suriname guilder FIM - Fin marika FRF - Frantsa Frank ECU - ECU YUM - Yugoslavian Dinar vaovao
Isaky ny 5 minitra Isaky ny 15 minitra Isaky ny ora
Show: androany bola tsena tsena ny habetsahan'ny varotra ny volan'ny varotra
BTC = 57 180.67 USD
Fiovan'ny fifanakalozana nanomboka omaly
Bitcoin sarimihetsika mivantana
Bitcoin cap cap
1 083 381 220 944.80 US dolara
-16 965 906 046.30 USD (-1.54%)
Ampidiro ao amin'ny tranokalanao na blôginao ity widget ity.
ETH = 4 641.04 USD
Ethereum sarimihetsika mivantana
Ethereum cap cap
528 596 936 944.74 US dolara
-258 271 825.55 USD (-0.048836%)
XRP = 1 USD
XRP sarimihetsika mivantana
47 302 880 794.80 US dolara
-1 528 255 929 USD (-3.13%)
BCH = 572.25 USD
Bitcoin Cash sarimihetsika mivantana
Bitcoin Cash cap cap
10 813 464 982.54 US dolara
-678 147 729.28 USD (-5.90%)
EOS = 4.01 USD
EOS sarimihetsika mivantana
EOS cap cap
3 887 919 999.33 US dolara
-168 959 710.80 USD (-4.16%)
Fiakaran'ny vidin'ny varotra Dinika dizitaly eran-tany. Ny sandan'ny sarany androany amin'ny tahan'ny crypto.
Firam-bola amin'ny fifanakalozana virtoaly an-tserasera, tena sarobidy.
Tantara ara-tantara virtoaly virtoaly. Ny vidin'ny vidin-tserasera, ny tantaran'ny nomerika digital.
Famaritana amin'ny tsenam-bola dizitaly: fampanantenana be indrindra, vaovao vaovao azo antoka sy tena mahasoa indrindra ankehitriny.
Ny vola mitentina kryptôla amin'ny vidiny amin'izao fotoana izao.
Ny kriptokaly amin'ny vidiny tsara indrindra amin'izao fotoana izao.
Ny vola mitentina cryptôzy amin'ny saram-pianarana sy ny volan'ny varotra amin'izao fotoana izao.
Ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny vidin'ny dinika dizitaly eto amin'ny tranonkalantsika dia mampiseho ny vidin'ny sarisary hafa ankehitriny amin'ireo hofidiana voafidy amin'izao fotoana izao. Ny vidin'ny fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly dia isaina ho sandany salan'isa amin'ny tsena crypto rehetra eto amin'izao tontolo izao izay atakalo ity dinika dizitaly ity. Azonao atao ny manaraka ny fifanakalozana fifanakalozana elektronika raha te hahita ny tsara indrindra fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly amin'ny fividianana sy ny fivarotana.
Ny vidin'ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny tranonkalantsika dia havaozina isaky ny 30 segondra. Ianaro ny tahan'ny fifanakalozana crypto amin'ny Internet maimaimpoana sy dieny izao.
Ny vidin'ny fifanakalozana dinika dizitaly dia atakalo amin'ny fifanakalozana crypto-fifanakalozana sy ny tsena crypto-tsena samihafa. Tsy toy ny vola mahazatra, tsy misy olona mametraka ny tahan'ny ho an'izao na anio rahampitso. Mandritra ny fifanakalozana dinika dizitaly tsirairay dia miova ny tahan'ny fifanakalozana dinika dizitaly amin'ny elanelam-potoana hafa. Mba hahafantaranao tsara ny tahan'ny dinika dizitaly, dia mila manisa avy hatrany eo amin'ny salan'ny fihenam-bola amin'ny tsenam-bola crypto rehetra ianao.
Cryptoratesxe.com kajy ny tahan'ny fifanakalozana antitra antonony antonony eo amin'ny tsenam-bola crypto rehetra.
Fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly, tahan'ny an-tserasera
Manara-maso tsy tapaka ny 8768 ny fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly amin'ny tsenam-bola crypto rehetra eto amin'izao tontolo izao.
Betsaka ny vola virtoaly ary tsy izy rehetra ireo no manakalo fifanakalozana fifanakalozana crypto isan-andro.
Izahay dia manara-maso izay crypto no amidy amin'ny tsenam-bola crypto ary manangona ny tahan'ny dinika dizitaly ankapobeny ho an'ny fifanakalozana rehetra atao eo amin'ny tsenam-bola crypto rehetra mba hanisa ny salan'isa amin'ity dinika dizitaly ity. Afaka mijery maimaim-poana ny fifanakalozana fifanakalozana any amin'ny dinika dizitaly havana amin'ny iray hafa ianao.
Azonao atao ny manara-maso ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana iray amin'ny havana dinika dizitaly amin'ny iray hafa mampiasa ny tontonana manokana. Ny tahan'ny crypto dia aseho amin'ny endrika tabilao sy isa, ny fiovan'ny tahan'ny dia aseho amin'ny sehatra mitokana amin'ny isan-jato. Ny dinika dizitaly mitombo ary ny fihenan'ny dinika dizitaly dia aseho amin'ny loko samihafa.
Ny fifanakalozana fifanakalozana tsara indrindra dinika dizitaly.
Ny tahan'ny fifanakalozana fifanakalozana tsara indrindra azo zahana amin'ny tabilao fanovana eo noho eo amin'ny vidin'ny dinika dizitaly eo amin'ny takelaka tranokala na eo amin'ny pejy fifanakalozana ny tahan'ny fifanakalozana dinika dizitaly amin'ny Internet. Rehefa mampiseho ny sanda farany ambany indrindra ny tahan'ny dinika dizitaly - izany no fotoana tsara indrindra amin'ny fividianana, ary rehefa mahatratra ny tahan'ny fifanakalozana farany farany ny dinika dizitaly - izany no fotoana tsara indrindra amin'ny fivarotana crypto.
Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny androany 30 Novambra 2021
Ny Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana amin'izao fotoana izao no fampahalalana fototra izay ampiasain'ny ankamaroan'ny olona. Azonao atao ny mahita ny taham-pianarana Bitcoin ho an'ny dinika dizitaly amin'izao fotoana izao na amin'ny sandam-bolan'ny tontolo iray ao amin'ny tranokalanay.
Izahay dia mampiseho ny fifanakalozana fifanakalozana amin'ny habetsahan'ny habibiana rehetra ary fantatsika ny tahan'ny fa tsy ho an'ny anio ihany, fa koa isan'andro.
Ny tahan'ny Bitcoin dia natsangana vokatry ny fifanakalozana amin'ny fifanakalozana ara-barotra samihafa mandritra ny fotoana maharitra, izay miankina amin'ny hamafin'ny varotra crypto. Amin'ny fandalinana ny fiovan'ny tahan'ny Bitcoin an-tserasera tato ho ato dia afaka maminavina ny vidin'ny dinika dizitaly ianao anio.
Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana tantara ho an'ny rahampitso 01/12/2021
Ny Bitcoin dinika dizitaly ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny rahampitso, 01/12/2021 dia miorina amin'ny salan'isa salanisan'ny isan'andro miorina amin'ny Bitcoin varotra amin'ny fifanakalozana fifanakalozana crypto ankehitriny. Rahampitso Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny Bitcoin amin'ny teboka fifanakalozana amin'ny 01/12/2021.
Araka izany, amin'ny fanaraha-maso ny fiovan'ny Bitcoin amin'ny fifanakalozana amin'ny tranokalanay mandritra ny andro, dia azonao atao ny maminavina ny tahan'ny Bitcoin ho rahampitso sy ny fifanakalozana tahan'ny ny Bitcoin amin'ny teboka an-tserasera rahampitso 01/12/2021.
Amboary ny tontolon'ny fanandramana Bitcoin eo amin'ny pejy lehibe amin'ny tranokalan'ny fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly ary jereo ny tarehin'ny Bitcoin amin'ny Internet. Hoheverinao ho marina ny taham-paran'ny Bitcoin ho rahampitso.
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Bitcoin manoloana ny dolara ankehitriny
Bitcoin Ny sandam-bola ny tahan'ny fifanakalozana ankehitriny no tena Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny tsenan'izao tontolo izao. Ny tahan'ny fifanakalozana ny Bitcoin manoloana ny dolara izay mamaritra ny tahan'ny fifanakalozana ny Bitcoin amin'ireo vola hafa.
Afaka mahita ianao rate of Bitcoin ny dolara eto amin'ny Internet eto .
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Bitcoin hanoherana ny euro ankehitriny
Ny taham-panakalozana ny Bitcoin mankany euro ho an'ny anio dia aseho ihany koa ao amin'ny tranokala cryptoratesxe.com
Bitcoin to Euro rate for today - tabilaon'ny Bitcoin ny tahan'ny tahan'ny Euro dia salanisa ho an'ny fifanakalozana fifanakalozana crypto rehetra.
Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny euro satria iray amin'ny vola lehibe indrindra eto an-tany no mamaritra ny Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny vola hafa eran-tany. Track Bitcoin ny tahan'ny fifanakalozana ho an'ny androany ao amin'ny dashboard an-tserasera.
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Ethereum manoloana ny dolara ankehitriny
Ethereum ny tahan'ny fifanakalozana dolara ho an'ny anio - ny salan'isan'ny Ethereum kosa dia eo amin'ny varotra rehetra eny amin'ny tsenam-bola crypto manerantany. Ny tahan'ny Ethereum ny dolara dia mamaritra ny tahan'ny Ethereum amin'ny vola hafa sy ny dinika dizitaly.
Afaka mahita ianao rate of Ethereum ny dolara eto amin'ny Internet eto .
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Ethereum hanoherana ny euro ankehitriny
Ny taham-panakalozana ny Ethereum mankany euro ho an'ny anio dia aseho ihany koa ao amin'ny tranokala cryptoratesxe.com
Ethereum to Euro rate for today - tabilaon'ny Ethereum ny tahan'ny tahan'ny Euro dia salanisa ho an'ny fifanakalozana fifanakalozana crypto rehetra.
Ny Ethereum ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny euro sy ny dolara ho ny sandam-bola lehibe indrindra eto an-tany no nametraka ny fototry ny Ethereum amin'ny vola rehetra eto amin'ny tany. Araho ny Ethereum ho an'ny tontolon'ny tranokalanay an-tserasera.
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Litecoin manoloana ny dolara ankehitriny
Taham-panakalozana Litecoin ny dolara ankehitriny - ny tahan'ny salan'ny Litecoin izao dia nivarotra ny fifanakalozana fifanakalozana crypto. Ny tahan'ny ny Litecoin ny dolara no mamaritra ny taham-bolan'ny Litecoin amin'ny vola sy dinika dizitaly hafa.
Jereo ny Litecoin ny sandam-bola amin'ny fifanakalozana dolara eto amin'ny serasera .
Ny tahan'ny fifanakalozana ny Litecoin hanoherana ny euro ankehitriny
Ny tahan'ny fifanakalozana Litecoin mankany Euro ho an'ny anio dia aseho eto amin'ny pejy manokana.
Litecoin ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny euro ho an'ny anio - an-tserasera Litecoin ny tahan'ny euro dia ny salan'isa ho an'ny fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly.
Ny Litecoin ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny euro sy ny dolara ho ny sandam-bola lehibe indrindra eto an-tany no nametraka ny fototry ny Litecoin amin'ny vola rehetra eto amin'ny tany. Araho ny Litecoin ho an'ny tontolon'ny tranokalanay an-tserasera.
Ny tahan'ny fifanakalozana ny XRP manoloana ny dolara ankehitriny
Jereo ny XRP ny dolara amin'ny Internet .
Ny XRP ny tahan'ny fifanakalozana amin'ny dolara ankehitriny - ny salanisa XRP dia eo amin'ny varotra crypto izao. Ny tahan'ny XRP ny dolara dia mamaritra ny tahan'ny XRP amin'ny vola hafa rehetra sy ny dinika dizitaly.
Ny tahan'ny fifanakalozana ny XRP hanoherana ny euro ankehitriny
Ny XRP Ny Euro ny tahan'ny fifanakalozana amin'izao fotoana izao dia aseho amin'ny pejy iray misaraka.
XRP ny tahan'ny euro amin'ny anio - ny XRP ny tahan'ny tahan'ny euro ao amin'ny internet dia ny salan'isa amin'ny fifanakalozana fifanakalozana dinika dizitaly.
The XRP ny euro sy ny dolara satria ny vola lehibe no fototry ny XRP ny vola hafa rehetra. Araho ny XRP vidiny anio amin'ny takalon'ny takelaka fifanakalozana amin'ny tranonkalanay an-tserasera.